कलियुगका कुरा: नक्कली डिभिडी पसलेसँग हवल्दारको सर सापट
नक्कली डिभिडी पसलेसँग हवल्दारको सर सापट
जमलको दुधसागर मिठाई पसलको ढोकैमा नक्कली डिभिडी/सिडीको पसल छ। भित्र चिया पिउँदै सिसाबाट बाहिर हेर्दै थिए। एक जना पुलिस हवल्दार ड्रेसमै आए। डिभिडी वालाले खल्तीबाट खै कतिको हो नोट दिए। हवल्दारले खोल्टीमा हालेर गए। लाग्दैछ सक्कली किन्न नसकेर नक्कली डिभीडी किनेर मैले तिर्ने अलिकति पैसा पुलिसकाँ नि जाँदोरहेछ। हवल्दार यी डिभीडी पसलवालाको सर-सापट चल्दैन होला त...
nil Sharma Subedi, Bindukant Ghimire, Prajjwal Chapagain and 12 otherslike this.
मेरो नाम सुजु camera le pani click garnu bahko bhaye ekdum better hunthyo..
Thursday at 11:41am ·
Jaw Knock Raazaa हा हा हा हा त्याँट मैले नि किन्या छु बाबै । डि भि डि त नक्कली नै भए नि राम्रै हुन्छन । तिनी तराइतिरका दाजु मज्जाका पनि छन । तिन्लाई अर्थोक केइ था नभे नि कुन english movie कती साल मा ओस्कार मा nomineT भाको थ्यो कन्ठ छ । :)))) हल्दार दाजुले ब्यानै फिलिम लग्याथे होलान, सरो नभएर फिर्ता पछी लेका होलान नि त । :))
विशद सलामबिहानी कसरी नक्कली हुनु ? हल्दार मार्फत ट्याक्स तिरेकै छन् त... :)
Hari Gajurel to hawoldar ko name yad garnu pardaina ta?tapi pani chhaya mai makha..................
Shahi Rosh habaldar sangha katai tapanji chahi .......